Trano hazo Ho amidy sy manofa amin'ny Realtyww Info
Trano hazo na fananganana hazo dia tranobe vita namboarina miaraka amin'ireo vatan-kavoana niampita teo amin'ny zoro tamin'ny fanoratana. Mety ho boribory, zoro na voapaina amin'ny endrika hafa ny vatan-kazo, na vita tànana na nohosorana. Ny anarana hoe "log cabin" amin'ny ankapobeny dia manondro trano kely hazo sy rustika kely kokoa, toy ny trano fivarotana mihaza any anaty ala, izay mety na tsy manana herinaratra na fandoroana rano. Ny fananganana vatan-trano no teknika fanamboarana mahazatra indrindra any amin'ireo faritra lehibe any Soeda, Failandy, Norvezy, ny fanjakana Baltic sy Rosia, izay amboarina ny hazo konifika mahitsy sy lava, toy ny kesika ary fambolena. Nampiasaina be izy io ho an'ny tranobe vernacular any Atsinanan'i Eoropa Afovoany, ny Alps, ny Balkans ary ny faritra any Azia, izay misy ny toe-piainana na toa izany. Any amin'ny faritra mafana kokoa sy malefaka kokoa any Eoropa, izay ny ankamaroan'ny hazo mihintsan-dravina dia ny famonosana hazo no notadiavina.